प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर परामर्शमा : राजीनामाको सम्भावना कति ? – Nepal Japan
प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर परामर्शमा : राजीनामाको सम्भावना कति ?
नेपाल जापान १७ असार १३:४१
पार्टी स्थायी समितिका ९९ प्रतिशत सदस्यले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री तथाा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेता तथा मन्त्रीहरुसंग परामर्शमा जुट्नुभएको छ । ओलीको राजीनामा चाहनेहरु यो खबरले उत्साहित हुँदै राजीनामा आउने सन्देश साममाजिक संजाल तथा अनलाइनहरुमा प्रवाह गर्न थालेका छन् ।
बुधबार विहानैदेखि ओली मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग परामर्शमा लाग्नुभएको छ । परामर्शका लागि मन्त्रीहरु बिहान ७ बजेदेखि नै बालुवाटारमा भेला भएका छन् ।
नेकपा स्थायी समितका १८ मध्ये १९ सदस्यले दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली तनावमा पर्नुभएको हो । नेकपाको मंगलबार बसेको स्थायी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकाशं नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।
बुधबार ११ बजे स्थायी समितिको वैठक बस्दै छ । यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धारणा राख्नुहुने बताइएको छ । त्यसैको तयारीका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा आफू निकट नेताहरुको छलफल चलिरहेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति वैठकमा आफ्नो रणनीति र कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सल्लाह गरिरहेको र बैठकमा मन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्यसँगै ओली निकट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि छलफलका लागि बालुवाटारमा हुनुहुन्छ ।
मंगलबार स्थायी कमिटि बैठक सुरु हुनअघि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास जानुभएको थियो । उहाँ आउन ढिलाइ भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक सुरु गर्नुभएको र प्रचण्डले बोल्दाबोल्दै ओली बैठकमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । ओलीलाई देख्नासाथ अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँको भनाइ थियो, ‘मैले वैशाखमा बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि तपाईंको राजीनामा मागेको हुँ, अहिले पनि माग्छु । सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनाम भयो, देशभित्रका जनताले र पार्टीका नेताले राजीनामा मागेका छन् । तर, तपाईं भारतले हटाउन खोज्यो भनेर देश र जनताको अवहेलना गर्दै हुनुहुन्छ, सबै स्थिति हेर्दा तपाईं हट्दा राम्रो हुन्छ, हट्नुस् ।’
बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नासाथ आफ्नो राजीनामा मागिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईहरूले मेराविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ, खुमलटारमा बसेर रणनीति बनाएर यहाँ आउनुहुन्छ । भारतीय मिडियामा त्यही भाषामा समाचार आइरहेका छन् । दुवैतर्फको भाषा कसरी हुबहु मिल्छ ? प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागे भनेर त दिल्लीकै मिडियाले भनिरहेका छन् नि । मैले भारतको विषयमा बोल्दा तपाईंहरूलाई दुख्नपर्ने कारण के छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।